Ukudla cottage shizi Casserole ku-microwave ekulungiseleleni Akumangalisi ngokushesha. Namuhla sifuna ukuhlanganyela ezinye izindlela kulolu izitsha esihlwabusayo futhi unempilo.
Cottage shizi Casserole ku-microwave "Ukudla". iresiphi
Uma ngenkuthalo ukuzivocavoca bese ubuka ekudleni kwakho, khona-ke ngokuqinisekile ufuna ukunambitha lokhu dish. Futhi, iresiphi yethu ulusizo labo abanquma ukuba ulahlekelwe isisindo. Indlela ukulungiselela a wezokudla cottage shizi Casserole ku-microwave, ungafunda ku.
Hlikihla ngokusebenzisa ngesihlungo 500 amagremu izaqheqhe.
Xhuma umkhiqizo nge amaqanda inkukhu.
Engeza ambalwa wezipuni ushukela noma esikhundleni sawo stevia. Futhi wabeka lesinamoni noma vanilla ukunambitha.
Hlanganisa umkhiqizo bese uwafaka ifomu ukushisa ukumelana.
Beka Casserole kuhhavini bese ukuphela imizuzu eyisishiyagalombili. Lapho isignali ifomu ezwakalayo kufanele ukulawula. Ngemva lesi sidlo kungenziwa fed etafuleni ne-yogurt noma ephansi fat ukhilimu omuncu.
Cottage shizi Casserole ekudleni microwave ngezithombe
Lokhu dish kufanelekile hhayi ngenxa yalabo abaye yanquma umzimba. Kungaba yini ngokuphepha kufakwe okhulelwe kunina noma kumntwana imenyu. Cottage shizi Casserole ku wezokudla microwave uzilungiselele kanje:
Beka 250 amagremu cottage shizi endishini bahlanganise kahle ngemfoloko.
Engeza ke ambalwa nezinkezo ushukela amabili wezipuni okusanhlamvu (semolina noma corn).
Endaweni ehlukile, beat amaqanda amabili, i-bhotela, spoon kanye soda kancane.
Xhuma ukudla okulungiselelwe uhlanganise kahle.
Beka "test" in ingilazi dish ngoba microwave futhi uvale lid.
Lungiselela Pudding imizuzu eyisishiyagalombili, bese uthwala etafuleni. Khonza kushisa noma kubanda. Ungase usebenzise kahle ke njengendlela dessert wezokudla itiye.
Cottage shizi Casserole ku Dyukanu
Nalokhu iresiphi uqobo ungakwazi pamper kwalabo abakhululekile esigabeni lapho enye amaprotheni nemifino izinsuku. Indlela ukulungiselela wezokudla cottage shizi Casserole ku-microwave? Iziyalezo ekuwulungiseleleni ungafunda lapha:
Esikhathini isitsha blender ukubeka 600 amagremu yogurt engenawo amafutha, ababili wezipuni bran, amaqanda amathathu, isipuni esigcwele ushukela esikhundleni kanye isipuni se-baking powder.
imikhiqizo Gaya kuze iyunifomu.
Beka mass okuholela efolomeni ingilazi ubhake kuhovini microwave imizuzu eyishumi.
Ngaphambi sikhonza Imi isidlo yizabelo futhi uthele ephansi fat yogurt.
Casserole imizuzu emihlanu
Uma ungenalo isikhathi sasekuseni noma isidlo ntambama, zama ukusizakala iresiphi yethu. Ngalo, ungakwazi ngokushesha ukondla wonke umndeni. Ukudla cottage shizi Casserole ku-microwave kwenziwa ngokuvumelana iresiphi elandelayo:
Hlanganisa endishini enkulu 350 amagremu of ushizi fresh, amaqanda amabili, izinhlu ezimbili nezinkezo of semolina, ezimbili nezinkezo ushukela, vanilla, wageza amagilebhisi omisiwe. Cottage shizi kungenziwa wagcoba ngokusebenzisa ngesihlungo, kepha uma ukushesha awudingi ukuchitha isikhathi kuso.
Beka "test" e isikhunta abicah noma isikhunta amancane for muffins. Khumbula ukuthi isabelo ezincane, ngokushesha kuyoba ukupheka.
Bhaka isidlo imizuzu emihlanu ngesikhathi namandla aphakeme.
Casserole ngaphambi kokukhonza ungakwazi ufafaze ephansi fat yogurt noma "ukukhanya" ukhilimu omuncu.
Cottage shizi no berry Gratin
Lena isidlo esihlwabusayo kakhulu efana izingane kanye nabantu abadala. Ehlobo ungasebenzisa noma yikuphi amajikijolo fresh, futhi eqandisiwe ebusika. Indlela Yokuthola Casserole engavamile sisobala:
Phansi ingilazi isikhunta wokubhaka gcoba uwoyela ufafaze breadcrumbs.
Endishini uwuhlikihle ngokusebenzisa ngesihlungo 500 amagremu ongaphakeme amafutha cottage shizi.
Engeza nalokho ngesiswebhu ibe okuqinile Foam amaprotheni ushukela kancane (it ungayithola enye stevia), 50 amagremu semolina kanye 50 amagremu of ayisikhilimu.
Hlanganisa konke mikhiqizo.
Thela isikhunta isigamu curd mass ke babeka i ngisho ungqimba wageza obsushennye kanye amajikijolo, futhi ekugcineni ungqimba ushizi futhi. Inombolo amajikijolo ungakwazi ukuchaza ukunambitheka yakho siqu.
Beka bunjwa ku-microwave bese ukuphela imizuzu eyishumi Casserole.
Casserole nge izithelo candied
isidlo esihlwabusayo wabe esethi colorful is qiniseka ukujabulela amalungu ezinkulu nezincane nomndeni wakini wonke. Ilungiselela isidlo imikhiqizo kakhulu elula ngesikhathi esifushane. Ungakwazi aphathe obathandayo nalesi isidlo ngesidlo sasekuseni noma ukukhonza ke njengendlela dessert noma abandayo. Recipe casseroles ungafunda ngezansi:
Esikhathini isitsha blender ukubeka 400 amagremu cottage shizi, amaqanda amabili, izinhlu ezimbili wezipuni ushukela noma liguqule ingcosana usawoti, ababili wezipuni phansi bran vanilla ukunambitha.
Beat kuze imikhiqizo bushelelezi.
Khona-ke wafaka ingxube izaqheqhe izithelo candied uhlanganise kahle. Khumbula ukuthi isithako zokugcina alidingi ukuphathwa ngendlela ekhethekile. Inani ungase futhi ichaze owakho.
Beka "test" esitsheni sengilazi bhaka indawo ku-microwave.
Lungiselela Casserole at amandla okusezingeni eliphezulu imizuzu ayisishiyagalolunye.
Indlela ukupheka Batter
Indlela ukupheka i umusi omelet e multivarka
Utamatisi unamathisele - ukudla kanzulu
Indlela okumnandi kubhakwa salmon kuhhavini
Yelabuga ezikhangayo. Izithombe kanye nokubuyekeza
"Ehlathini SWT 550 Patrol": ukubuyekezwa kanye izici
Amadokhumenti adingekayo ukuqasha
Indlela ukupheka inyama namazambane ebhodweni kuhhavini
Ugwayi KaMose notamatisi. Indlela yokubhekana nale nkinga?
Ama-tattoos wesilisa esandleni: izici zomdwebo
Distribution - Iyini? Indlela yokusebenzisa ukusatshalaliswa Windows nezinye izinhlelo zokusebenza
Ukukhetha multivitamin: okuyinto engcono
Indlela ukupheka pepper eyayigcwele